२०७४ पौष २९ शनिबार ०७:५४:००
पत्रकारका पनि पत्रकार हुन् उनी । उनको समाचार कक्षमा काम गरेका धेरै पत्रकार अहिले चल्तीका सम्पादक छन् । उनले पढाएका सयौं पत्रकार अहिले पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेका छन् । उनकै विद्यार्थी अहिले उनकै अन्तर्वार्ता लिन उनकै घरसम्म पुग्छन् ।
उनी– यानेकि पी खरेल । नेपाली पत्रकारिताका सर्वकालीन हस्ती ।
४४ वर्ष भयो उनले पत्रकारिता सुरु गरेको । ३८ वर्ष भयो पढाउन थालेको । लामो अनुभव र खारिएको व्यक्तित्व हुन् पी खरेल । त्यसैले त उनीसँग एउटै ‘इभेन्ट’को समाचारमा दर्जनौं एंगल हुन्छन् । समाचारको प्रस्तुतिमा फरक ‘टेस्ट’ दिन सक्ने ल्याकत राख्छन् ।
लक्ष्य पत्रकार कि प्राध्यापक ?
एसएलसी दिँदा नै उनले आफ्नो भविष्य निर्धारण गरिसकेका थिए– इतिहास र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्छु अनि प्रोफेसर बन्छु ।
०२५ सालमा एसएलसी दिए । साढे १२ हजार परीक्षार्थीमा साढे ३ सयमात्रै पास भए । त्यसमा उनी पनि एक थिए । पहिलो श्रेणीमा उनले फलामे गेट नाघे ।
समय त्यो बेला पनि अहिलेको जस्तै थियो । सके विज्ञान, नसके कमर्स, त्यो पनि नसके बल्ल मानविकी वा शिक्षा पढ्ने चलन थियो । आर्थिक र पढाइमा कमजोरहरूले मात्रै मानविकी र शिक्षा पढ्छन् भन्ने मानसिकता थियो ।
तर, यी दुई ‘क्याटेगोरी’मा नपरे पनि खरेलले आफ्नो अठोट छाडेनन् । मानविकीमा भर्ना भए । राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी र इतिहास रोजे । स्नातकमा अंग्रेजी छोडे । इतिहास र राजनीतिशास्त्रलाई अगाडि बढाए ।
बीए पढ्न थालेपछि जागिर खानुपर्छ भन्ने सोच पलायो । उनी भूगोलपार्क हुँदै कलेज जान्थे । भूगोलपार्कमा ‘गोरखापत्र’ हेर्थे । त्यहाँ जागिर खोलिएका सूचना हुन्थे । ‘क्राइटेरिया’ पनि हुन्थे– अध्ययन यति, अनुभन यति... ।
पढाइ छ, अनुभव छैन । तनाव !
यो आफ्नो लागि बनेको जागिर होइन सोच्थे । अनि त्यो ढोका आफैं बन्द गर्थे ।
जागिर नखाई अनुभव नहुने, अनुभव नभई जागिर नपाइने । दुई समानान्तर रेखा जति तन्काए पनि कहिल्यै भेटिँदैनन् । यस्तै हुन्थे जागिरको ती सूचना । कहिले रिस उठ्थ्यो, कहिले उदेक लाग्थ्यो ।
०३० सालतिर ‘राइजिङ नेपाल’मा एउटा विज्ञापन देखे । ‘सब–एडिटर’ मागिएको थियो । अंग्रेजीमा दख्खल भएको हुनुपर्ने सर्त थियो । त्यहाँ ‘अनुभव चाहिन्छ’ भनिएको थिएन । भरे फर्म । दिए परीक्षा ।
अन्तर्वार्ता लिन ‘राइजिङ नेपाल’ का तत्कालीन सम्पादक गोपालप्रसाद भट्टराई र बरुण शमशेर बसेका थिए । उनलाई प्रश्न सोधे, “बजेट फेल भयो भने अर्थमन्त्री मात्रै जानुपर्छ कि पूरै सरकार नै जानुपर्छ ?”
उनले जवाफ दिए ।
फेरि भने, “दुःखको बेला मान्छेको पहिचान हुन्छ, यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुस् ।”
खरेलले त्यो पनि गरे ।
गोविन्द र गोपालप्रसादले बुझेनन्, बरुण शमशेरतिर हेरे । उनले ‘एस’ भने । खरेललाई कर्के आँखा सन्काए । उनलाई लाग्यो– जागिर हुन्छ कि के हो !
कलेज जाँदै थिए, गाडीमै भेटिएका साथीले भने, “तिम्रो नाम निस्किएको जस्तो छ ।”
उनी ‘राइजिङ नेपाल’ पुगे । ढोकामा बस्नेलाई सोधे, उनले ‘थाहा छैन’ भने । भित्र गएर अर्कोलाई सोधे, उनले पनि त्यही उत्तर दिए । खरेलको मनमा चिसो पस्यो– यिनीहरूले नदिने भए मलाई जागिर ।
अझै भित्र पुगेर सोधे । जवाफ आयो, “निस्किन त निस्कियो क्यार ! तर, कसको निस्कियो । बस्नुस् न ।”
छातीभरि डर बोकर खरेल सोफाको छेउमा बसे । भित्रबाट हाकिम निस्किएर भने, “तपाईं पर्शुराम खरेल हैन ? कंग्ग्रयाचुलेसन्स ।”
ढक्क छाती फुल्यो । लाग्यो– आज संसार जितियो ।
नियुक्तिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । र, सुरु भयो ‘राइजिङ नेपाल’को जागिर ।
जागिर हुनुअघि उनी महिनामा दर्जनौं साप्ताहिक र मासिक पत्रिका किन्थे । जागिर तय भएको दिन उनको मनमा आएको पहिलो प्रतिक्रिया थियो– वाह ! आजबाट पत्रपत्रिका किन्न पैसा अभाव हुन्न ।
‘राइजिङ नेपाल’मा तीन जनाको कोटा थियो तर नाम उनको मात्रै निस्कियो । उनीसँगै लिखितमा नाम निकाल्ने अरु दुई जना पनि थिए । तर, अन्तर्वार्तामा उनीहरूको नाम आएन ।
“शायद उहाँहरू बिलो एभरेजमा पर्नुभयो,” खरेल भन्छन्, “मेरो अनुमानमात्रै हो । तर, उहाँहरू पछि ठूलो मान्छे हुनुभयो । दुवै जनाले संस्थानको नेतृत्व गर्नुभयो ।”
‘गोरखापत्र’को समाचार अंग्रेजीमा उल्था गर्नु पथ्र्यो । समाचार राम्रो छ भने मात्रै, नत्र उनी आफैं समाचार मिलाएर अनुवाद गर्थे । यसै गरेबापत उनले एकपटक सय रुपैयाँ पुरस्कारसमेत पाएका थिए ।
भर्खर जागिर सुरु भएको थियो । उनलाई पनि खासै राम्रोसँग टाइप गर्न आउँदैनथ्यो । दुई औंलाले बिस्तारै टाइप गर्थे । धेरै रिपोर्टरलाई त त्यही पनि आउँदैनथ्यो । त्यतिबेला सम्पादक श्याम केसी थिए ।
“समाचार सकेसम्म राम्रो बनाएर टाइप गर्थें, समय हुनेबित्तिकै रिपोर्टिङ गर्न दौडिन्थें । यो इनर्जेटिक छ है भन्थे,” उनी जागिरे जीवनको सुरुआती चरण सम्झिन्छन् ।
सुरुका करिब १५ वर्ष खरेलले खेलकुद र मनोरञ्जनको रिपोर्टिङ गरे । पञ्चायतकाल थियो । पञ्चायतको विपक्षमा राजनीतिक समाचार लेख्न पाइँदैनथ्यो । त्यसमा पनि सरकारी पत्रिका । “समाचार लेख्दा आधा समय त भोलि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हो कि भन्दै सोच्दैमा बित्थ्यो,” उनले सम्झिए ।
समाचारमा बाइलाइन दिइहाल्ने चलन थिएन । बाइलाइन आउन काठमाडौंबाहिर नै रिपोटिङ गर्न जानुपथ्र्यो ।
०४६ सालमा मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री थिए । भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यही समय उनी रिपोर्टिङका लागि भारत गए ।
उनी नेपालबाहिर गएर पूर्णकालीन रिपोर्टिङ गर्ने पहिलो पत्रकार हुन् । उनी आफैं भन्छन्, “मभन्दा पहिला पनि अरु नगएका होइनन् तर उनीहरू त त्यहाँको संसद भनवसम्म पुग्दा नै रहेछन् । अरु सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार पठाउँदा रहेछन् । त्यहाँको संसदमा नेपालबारे विभिन्न सन्दर्भमा छलफल भइरहन्थे तर कहिल्यै आउँदैनथे । म गएपछि भने संसद् पुगेरै रिपोर्टिङ गरेँ । हप्ताका ६ दिन साँझ ५ बजे शास्त्री भवनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गर्थे ।”
एक वर्षपछि उनलाई ‘राइजिङ नेपाल’ले साप्ताहिक म्यागेजिन निकाल्ने भनेर बोलायो । त्यसमा उनको जिम्मेवारी सम्पादक थियो । म्यागेजिनको नाम राखे जिम्मा उनैलाई दिइयो । ‘सन्डे म्यागेजिन’ नाम राखे र निकाले । पहिलो अंक नै १० हजार ५ सय प्रति छापे । ‘राइजिङ नेपाल’को एक रुपैयाँ मूल्य हुँदा त्यसको मूल्य ५ रुपैयाँ थियो ।
सन् १९९२ मा श्याम केसीले राजीनामा दिए । दोस्रो वरीयता (कार्यकारी सम्पादक)मा खरेल थिए । सम्पादक हुने पालो उनकै थियो । राजनीतिक चलखेल भयो । त्यसको कोपभाजनमा परे उनी ।
साहित्यकार तारानाथ शर्मालाई ल्याएर नियुक्त गरियो । उनले बुझे– मलाई सम्पादक हुन नदिनकै लागि शर्मालाई ल्याइयो । २० वर्ष पुग्नै लागेको थियो । कुरे । २० वर्ष पुग्यो । उनले राजीनामा दिए ।
बिदाइको दिन उनलाई व्यवस्थापनले रिबनमा बाँधेर उपहार दियो । उनले सोधे, “के छ यसमा ?”
“यो पनि अपेक्षा गरेको थिइनँ, दिनुभयो, धन्यवाद । तर, यो रिबन त्यो दिन म यहीँ आएर खोल्छु र यो पार्करले यहाँको सम्पादकको नियुक्तिपत्रमा साइन धस्काउँछु, हेर्दै जानू,” कठोर भएर भने उनले ।
सम्पादकको जिम्मेवारी सम्हालेर संस्था हाँक्नुपर्ने तर निर्भीक खरेल २० वर्ष काम गरेको संस्था छोडेर घर फर्किए ।
०३६ सालदेखि पढाउन थालेका खरेललाई पेशाको खाँचो थिएन । लेख लेख्न अरु पत्रिका छँदै थिए । पुस्तक लेख्छु भन्ने सोचिरहेका थिए । त्यो अवसरका लागि ढोका खुल्यो । पुरानै मैदानभित्र नयाँ अध्याय सुरु भयो ।
उनले ‘राइजिङ नेपाल’ छोडेको १३ महिनापछि एमालेको सरकार बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । सञ्चारमन्त्री प्रदीप नेपाल थिए । प्रदीपसँग आईए पढे पनि चिनजान थिएन । एक एमाले सांसद्ले फोन गरे । उनलाई सम्पादकका लागि एमाले सरकारले आग्रह गर्‍यो ।
१३ महिनापछि खरेल त्यही उपहारस्वरूप दिइएको पार्कर कलम बोकर ‘राइजिङ नेपाल’ पुगे । र, रिबन खोलेर नियुक्तिपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
राप्रपा सरकारले उनलाई निरन्तरता दियो । विभिन्न कार्यक्रममा भेट हुँदा कमल थापा ‘छोड्नु हुँदैन है खरेल जी’ भन्थे ।
पछि उनी जर्मन संस्था ‘एफएएस’को मिडिया पर्सनका रूपमा ‘राइजिङ नेपाल’को सम्पादक छोडेर गए । आकर्षक पारिश्रमिक र मिडियाकै काम भएकाले उनी त्यतातर्फ आकर्षित भएका थिए ।
पछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को महाप्रबन्धक भएर जान सुझाए, तर उनले मानेनन् ।
उनी ‘राइजिङ नेपाल’मै हुँदा एउटा कार्यक्रममा गणेशमान सिंहले भने, “प्रजातन्त्रले आफ्नै बच्चा खान्छ ।”
सीधै नभने पनि उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । खरेलले त्यसलाई समाचार बनाएर छापे ।
शायद दबाब आयो, प्रशासन प्रमुख पुरुषोत्तम बस्नेतले उनलाई सोधे, “यो नछापेको भए के हुन्थ्यो ?”
निर्भीक र निडर स्वभावका खरेल समाचार छाप्न डराउँदैनथे । कसैको हप्की र खप्कीबाट विचलित हुँदैनथे ।
मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । उनका राजनीतिक सल्लाहकार ईश्वर पोखरेल थिए । मनमोहनले सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, “राजतन्त्र यहाँ केही समयका लागि छ ।” खरेलले ‘रासस’बाट तानेर यसलाई छापे ।
ईश्वरले फोन गरेर भने, “समाचार त छापियो । तर, यो बोलेकै होइन, भूल भएछ भनेर भोलिको पत्रिकामा पहिलो पेजमै माफी माग्नु पर्‍यो ।”
खरेलले भने, “हामीले गरेको गल्ती होइन । ‘रासस’को समाचार जस्तो आयो, त्यस्तै छापिन्छ । ‘रासस’ले गल्ती स्वीकार गरेर पठायो भने छापिन्छ, होइन भने खण्डन लेखेर पठाउनुस्, म छापिदिन्छु । तर, म राइजिङ नेपालले गल्ती गर्‍यो भनेर माफी छाप्दिनँ । यो मेरो पेशागत मर्यादाभित्र पर्दैन, नैतिकताले दिँदैन ।”
साँझ ‘रासस’ले गल्ती भन्दै माफी पठायो । त्यसलाई भने उनले छापिदिए ।
खरेललाई विश्वास गर्ने हो भने उनले पदका लागि कहिल्यै लोभ गरेनन् । आशक्ति देखाएनन् र शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन ढोकाढोका धाएनन् ।
चिरञ्जीवी वाग्ले सञ्चारमन्त्री हुँदा सञ्चार सचिव भोजराज पोखरेल थिए । भोजराजले खरेललाई बोलाएर भने, “तपाईं अब सल्लाहकार भएर बस्ने कि ?”
उनको आशय खरेललाई सम्पादकबाट हटाएर अरु कसैलाई नियुक्त गर्ने तर उनले खाईपाई आएको सुविधा भने दिने भन्ने थियो । खरेलले भने, “सल्लाहकार सम्पादक बस्ने रहर छैन मलाई, सम्पादकमा बस्न पाए बस्छु नभए ठाउँ खाली गरिदिन्छु ।”
खरेलसँग समाचारकक्षमा काम गरेका अहिले पनि धेरै छन् सञ्चारमाध्यममा । उनी कार्यकारी सम्पादक हुँदा अखिलेश उपाध्याय र प्रकाश रिमाल ‘राइजिङ नेपाल’ पुगेका थिए, रिपोर्टरका रूपमा । खरेलले नै उनीहरूको परीक्षा लिएका हुन् । अहिले अखिलेश ‘दि काठमान्डू पोस्ट’ र प्रकाश ‘दि हिमालयन टाइम्स’का सम्पादक छन् ।
पत्रकारिता थालेको ६ वर्षपछि उनले पत्रकारिता प्राध्यापन थालेका हुन् । उनका थुप्रै विद्यार्थी अहिले कतै न कतै कार्यरत छन् । कति सम्पादक भए, कति ‘रिटायर्ड’ भइसके । केही लेखाजोखा छैन ।
पत्रकार लोकदीप थापा, दिनेश सत्याल (सौरभ), पुरन्धर घिमिरे, माधव ढुंगेल, राजेश बज्राचार्य, रवीन्द्र मिश्र उनकै विद्यार्थी हुन् । अहिले पत्रकारिता विभागका प्रमुख चिरञ्जीवी खनाल पनि उनकै विद्यार्थी हुन् ।
उनले पढाएनन् मात्रै, पुस्तक पनि लेखे । नेपालमा पत्रकारिताको पढाइ सुरु भए पनि विद्यार्थीका लागि कोर्सबुक थिएनन् । सन्दर्भ सामग्री थिएनन् । त्यही अभाव पूर्ति गर्न उनले पत्रकारितासम्बन्धी किताब लेख्न थाले । अहिलेसम्म उनले २० वटा किताब लेखिसके । त्यसमा दुइटाबाहेक सबै पत्रकारितासम्बन्धी नै छन् ।
खरेलले समाचारमात्रै लेखेनन्, नेपालभित्र र बाहिरका ‘गोरखापत्र’, ‘राइजिङ नेपाल’, ‘मिरर’, ‘द डेली’, ‘स्पटलाइट’, ‘इन्डिपेन्डेन्ट’, ‘डेकन हेराल्ड’लगायत एक दर्जन पत्रिकामा स्तम्भ पनि लेखे । ‘पटपुरी’, ‘इन ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’, ‘इगल आई’ उनका स्तम्भ हुन् ।
स्तम्भ विचार पृष्ठमा छापिन्थ्यो । लेख र सम्पादकीय राखेर बाँकी रहेको एक वा दुई कोलममा उनको स्तम्भ छापिन्थ्यो । ठाउँ साँघुरो हुन्थ्यो । पुछारमा स्तम्भकारको नाम लेखिन्थ्यो । लेखको सुरुमै नामको आकार केही ठूलो र बोल्ड गर्दा समस्या आइलाग्यो । पर्शुराम खरेल लामो भएकाले अट्दैनथ्यो । बोल्ड नगरी के राख्नु ! नअट्ने नै भएपछि उनले ‘पी खरेल’ मात्रै राखे । दुई हप्ता त्यसैगरी छापिएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईका दाइ गोपालप्रसादले भने, “यही राम्रो छ, अब यही राख ।”
कालान्तरमा उनलाई यही नामले चिन्न थालियो । पर्शुराम खरेल र पी खरेल एउटै व्यक्ति हुन् र ? भन्ने अवस्था आयो ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै लेखे लेख्ने पत्रकार खरेल नै हुन् । उनले आजसम्म ३ हजारभन्दा धेरै लेख लेखिससेका छन् । ३ हजारमा डेढ सय लेख नेपाली भाषामा छन् । बाँकी सबै अंग्रेजीमा छन् । उनले खेलकुद र मनोरञ्जनको विषयमा पनि थुप्रै लेख लेखेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिलोपटक पत्रकारिताको प्राध्यापक माग्यो । उनले फर्म भरे । उनीसँग अरु धेरैले फर्म भरेका थिए । परीक्षा दिए । तर, ५ वर्षसम्म पनि अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएन । ०६३ को आन्दोलनपछि बल्ल बोलायो । उनी गए । कतिले आफ्नै गुरुसँग के प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेर गएनन् । कति गए । नाम उनकै निस्कियो ।
नेपालमा पत्रकारिताको पहिलो प्राध्यापकको इतिहास उनकै नाममा रह्यो ।
‘राजावादी’ पत्रकार !
कतिले उनलाई राजावादी पत्रकार भन्छन् । अन्तर्वार्तामा पनि धेरैले घुमाएर यो प्रश्न सोध्ने गरेको उनको अनुभव छ । तर, उनी भने यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् ।
उनले यसलाई ‘नबुझेर गरिएको आलोचना’का रूपमा लिने गरेका छन् । राजावादी या अन्य कुनै पक्षको हुनुलाई उसको काममा त्यो झल्किनुपर्ने खरेलको तर्क छ ।
“मेरो पत्रकारिता जीवनमा मैले लेखेका समाचार र लेखमा राजावादीपन झल्यिो भने भन्नू । यहाँ बुझेर भन्दा पनि नबुझी टिप्पणी गरिन्छ । मलाई आरोप लगाउनेमा यही समस्या छ,” उनी भन्छन्, “तर सत्य के हो भने सक्रिय राजतन्त्र हुन्छ भन्नेमा मेरा साथीहरू थिए । त्यही भएर पनि हुन सक्छ– मलाई दरबारनजिकको आरोप लगाइयो ।”
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठन भएको राष्ट्रिय पत्रकार संघको उनी अध्यक्ष भए । त्यसले पनि उनलाई राजावादीको आरोप लगाउनेलाई बल पुर्‍यायो ।
“मलाई आग्रह गरे, तदर्थ समितिको अध्यक्ष भएँ । पछि साधारणसभाबाट त्यो पद मैले अरुलाई जिम्मा लगाइदिएँ । को कुन संगठनमा भनेर उसको पहिचान निर्धारण गर्ने भन्दा पनि उसले के गरिरहेको छ, त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो,” खरेल एकै वाक्यमा भन्छन्, “न मलाई त्यो बेला पश्चाताप थियो, न अहिले नै छ । यहाँ आफ्नो गुटमा आएन भने अर्को गुटको भन्ने प्रवृत्ति छ । अरुले भनेजस्तै म दरबारपरस्थ भएको भए धेरै ठाउँमा नियुक्ति लिइसकेको हुन्थें ।”
नेपालको संविधान प्रेस स्वतन्त्रका हिसाबले विश्वका कहलिएका देशभन्दा अगाडि छ । तर, प्रयोगमा भने त्यो नझल्किने खरेलको बुझाइ छ ।
नेपालमा पत्रकारिताको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दै राम्रो काम गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राख्छन् खरेल । सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै विशेष संस्थाको आवश्यकता पनि औंल्याउँछन् उनी । तर, समस्या छ राजनीतिको । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्ने गरेको उनलाई कत्ति चित्त बुझ्दैन ।
पत्रकार रघु मैनालीलाई उदृधृत गर्दै उनी भन्छन्, “संविधानसभा निर्वाचनमा ६० प्रतिशत रेडियो नेताका नाममा देखिएका थिए । तर, यो पछिल्लो निर्वाचनमा झन्डै ९० प्रतिशत सञ्चारमाध्यम दलका नेताहरूको पक्षमा उभिए ।”
ठूला सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक दलका समाचार लेख्ने पत्रकार सम्बन्धित दलका सदस्य हुने गरेको पनि उनलाई चित्त बुझ्दैन । भन्छन्, “समाचारमा राजनीतिक दलको वकालत गर्ने पत्रकारहरू भएसम्म सत्य, तथ्य समाचारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।”
सम्पादकहरू समाचार कक्षमा बसेर हरेक समाचारको सुपरिवेक्षण गर्ने चलन कम भएको जस्तो महसुस हुन्छ उनलाई ।
“समाचारका एंगल र भाषामा सम्पादकहरू उदासीन देखिएका छन्,” उनी भन्छन्, “मलाई कसैले तलब नदिए पनि म कुन सञ्चारमाध्यममा कस्ता समाचार आएका छन् भनेर दैनिक कटिङ गरेर बसिरहेको छु । सम्पादकहरूको काम चाहिँ के हो ?”
धेरै सञ्चारमाध्यमले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिँदा समस्या बल्झिएको उनलाई लाग्छ । “नौ महिनासम्म पनि पत्रकारले तलब नपाउने गरेका समाचार आइरहन्छन्,” उनी भन्छन्, “दिनेहरुले पनि मास्टर्स गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको पियनले पाउनेभन्दा कम दिन्छन् । त्यसमाथि नियुक्तिपत्र दिँदैनन् । दिए पनि तलब उल्लेख गर्दैनन् । तलब उल्लेख गरेछन् भने पनि त्यसअनुसार दिँदैनन् । असारमा नियुक्तिपत्र दिने ठूला मिडिया हाउसहरू नै हुन् ।”
नेपाली पत्रकारिताका सबल र दुर्बल पक्ष केलाएर बसिरहने खरेलसँग केही नैतिक सवाल पनि छन् । “वार्षिक मिडिया हाउसको आय–व्यय कति हो ? सही अडिट गरेर सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ? घाटामा गइरहेका छौं भन्ने मिडिया हाउसका मालिकहरू चत्रपथभित्रै बर्सेनि रोपनीका रोपनी जग्गा किनिरहेका छन् । त्यो आम्दानीको स्रोत के हो ? घाटामा भए किन दशकौंदेखि सञ्चारमाध्यम चलाइरहेको ?”
उनी यस्ता सवाल सधैंजसो उठाइरहन्छन् । तर, सुन्नुपर्नेले सुन्न खोज्दैनन् । सुन्न खोजेजस्तो गर्नेहरूले ‘सुन्ने सहनशीलता’ मात्रै विकास गरे ।